iyada / iyada
"Hogaamiyaha adeegaha ah ee udagaalama Edmontonia oo dhan"
Giselle waxay ku kortay tuulo yar oo macdanta laga qodo oo ku taal gobolka Benguet, Filibiin. Iyada iyo walaalkeed waxay noqdeen agoon kadib markii shil dilal ah uu ku dhintay waalidkeed iyo walaasheed. Sanadkii 2007, waxaa loo kafaala qaaday Kanada waxayna u guurtay Edmonton sanadkii 2008. Waxay dhamaysay Bachelor of Commerce oo ay ka qaadatay Jaamacadda Alberta School of Business, waxayna ka shaqeysaa hay'ad aan macaash doon ahayn oo siisa caawimaad sharci oo bilaash ah dadka saboolka ah.
Safarka Giselle ee cajiibka ah waxaa lagu diiwaangeliyey qormooyin dhowr ah sida Soo Kordhinta Qunyar Socodka Haweenka Mashruuca 150: Sheekooyinka Haweenka Muhaajiriinta ah ee 150, Paglalayag: Filibiin ilaa Kanada Safarka Taxanaha, Hoyga: Sheekooyinka Isku Xidhmaya Dhammaanteen, iyo Dabaaldega Haweenka Muhaajiriinta ah ee Kanada: Sheekooyinka Dhibaatada iyo Guul.
Giselle ee Golaha
Sanadihii la soo dhaafay, waxay ka soo shaqeysay guddiyada Rio Terrace Community League, Edmonton Board Advisory Board, iyo Edmonton Federation of Leigua Community. Waxay ku tabaruceysaa inay tahay qoraa wax ka qora Alberta Filipino Journal iyo harqaanka dharka loogu talagalay Boomerang Bags YEG iyo Edmonton Boorsooyinka loogu talagalay Shaqaalaha Caafimaadka. Waxay gacan ka geysataa sababaha caafimaadka iyada oo si joogto ah ugu tabarucda dhiigga Adeegyada Dhiigga ee Kanada iyo timaheeda loogu talagalay Xasuuqii Timaha, oo sanadle ah Edmonton lacag-ururin lagu taageerayo carruurta qaba kansarka.
Giselle waxay ku nooshahay xaafada Rio Terrace ninkeeda, walaalkeed kayar iyo dadka ay wada dagan yihiin. Maaddaama qof aan gaari wadi karin, way socotaa waxayna qaadataa transit si ay ugu dhex wareegto magaalada iyo galbeedka Edmonton tanina waxay saameyn ku yeelatay aragtideeda magaalada. Waxay si adag u aaminsan tahay in qof kasta oo Edmonton ku nool uu u qalmo nolol wanaagsan iyo barnaamijyo iyo adeegyo habboon, iyadoo aan loo eegin nooca guri ee ay leeyihiin, inta lacag ee ay helaan, ama sida ay u kala wareegaan.
Soodejiso Qalabka Warbaahinta ee Giselle